Izindaba - Yiziphi izidingo zokwakhiwa kwesikhungo sokuhlanza sefektri yokudla?
Uhlelo Lokuthungatha uthuli
Ikhabethe lokususa uthuli elomile
Emanzi ukugaya uthuli ukususwa iKhabhinethi
Igumbi lokufafaza elingenaluthuli
Imishini yamakhethini wamanzi eSiphepho
Ikhabethe lekhethini lamanzi elizimele
Ukwelashwa kwegesi yemfucuza
Imishini yokwelashwa kwegesi yemfucuza isiphepho
Ikhwalithi ephezulu kanye nentengo yefektri umbhoshongo webhayoloji
Kuvulwe umshini wekhabhoni ohlanganisiwe
Imishini esebenza kahle yokwelashwa kwegesi edonsa kanzima yomlilo
Ukwelashwa kwamanzi asetshenziswayo
Yiziphi izidingo zokwakhiwa kwesikhungo sokuhlanza sefektri yokudla?
Ukwakhiwa kwendawo yokusebenzela ehlanzekile efektri yokudla kudinga ukufinyelela ezingeni eliyi-100000 lokuhlanzwa komoya. Ukwakhiwa kwendawo yokusebenzela ehlanzekile efektri yokudla kunganciphisa ngempumelelo ukonakala kwesikhunta semikhiqizo, kwandise impilo yeshalofu lokudla futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza. Ungayakha kanjani indawo yokuhlanza yefektri yokudla? Yiziphi izidingo?
1. Ibhizinisi lokwakha elenza i-workshop yokuhlanzwa kwefektri yokudla kufanele libe neziqu zokwakha kanye nebanga elihambisanayo lobunjiniyela, futhi kufanele libe nohlelo lokuphatha ikhwalithi elifanele ngokuphelele.
2. Ukwakhiwa kwendawo yokuhlanza efemini yokudla kufanele kwenziwe ngokuya ngokuqukethwe yimibhalo nezinkontileka. Lapho ukwakhiwa kuguqulwa, kuzoqinisekiswa futhi kusayinwe yiyunithi yokuqala yokwakhiwa bese kuvunywa uphiko lokwakha.
3. Ngaphambi kokwakhiwa kwesikhungo sokuhlanza sefektri yokudla, uhlelo lwenqubo kanye nenqubo kufanele yenziwe ngokuya ngezimpawu zephrojekthi ethile, ukuze kuzuzwe ukwakhiwa okuhlelekile kwezinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi, izigaba ezicacile nokunikezwa okusobala, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi ephelele yokwakhiwa nokusebenza okuphephile.
4. Lapho ibhizinisi lokwakha lithatha ukwakheka okunemininingwane kwemidwebo yobungcweti endaweni yokuhlanza yefekthri yokudla, kufanele isebenzise izinhlinzeko ezifanele zekhodi ejwayelekile kazwelonke yokuklama iworkshop ehlanzekile (GB 50073), iqinise ikhwalithi yokuklama abaphathi, babe nohlelo lokuphathwa kwekhwalithi, futhi bathole imvume ebhaliwe noma isiqinisekiso seyunithi yokwakha yangempela kanye nemvume yophiko lokwakha, Kungaleso sikhathi kuphela lapho ukwakhiwa kungenziwa khona.
5. Imisebenzi efihliwe yamakhono ahlukahlukene e-workshop yokuhlanza ifektri yokudla kufanele yamukelwe futhi ivunywe yiyunithi yokwakha noma abasebenzi bokubheka ngaphambi kokufihla.
6. Uhlelo oluyalela ukwamukelwa kokuqedelwa kwenkundla yokuhlanza yefektri yokudla luzokwenziwa ngokubamba iqhaza ngokubambisana kophiko lokwakha kanye nophiko lokugada. Ibhizinisi lokwakha lizoba nomsebenzi wokubhekela uhlelo nokuhlola. Uphiko olwenza ikhomishini luzoba nabasebenzi bezobuchwepheshe besikhathi esigcwele bokukhokhisa kanye nokuhlola kanye nezinsimbi zokuhlola ezihambisana nemibandela yalokhu kuchazwa.
Ngaphezu kwalokho, indawo yokuhlanza yefektri yokudla kufanele yakhiwe ngokuya ngekhodi lokwakhiwa kweworkshop ehlanzekile. Udonga nophahla lwendawo yokusebenzela kumele lwakhiwe ngezinto ezingakhi uthuli futhi ezibushelelezi, futhi akumele kube khona ekhoneni elifile ku-workshop. Ipuleti elikhethekile lombala lokwakhiwa kwesitshalo sokuhlanzwa liyamukelwa, ipuleti lensimbi leBaogang 0.4steel lisetshenziselwa ipuleti ephezulu yepuleti lesisekelo, ukuminyana kwento esemqoka kufinyelela ku-14kg / m3, futhi okokusebenza kwe-aluminium kwamukela iphrofayili ekhethekile ye-aluminium yaseHualian. Ukuze uthuthukise impilo yenkonzo yegumbi lokuhlanza futhi ufeze umphumela wokubukeka okuhle, wonke amaphrofayili we-aluminium aphathwa nge-electrophoretically.
I-solvent based epoxy resin isetshenziswa emhlabathini, ngamandla angaphezu kwe-C20 nendawo eminyene ngaphandle kwesihlabathi, i-hollowing nemifantu. Umbala okhanyayo, ukusebenza okungapheli kwe-static, kungamelana nomthwalo ophakathi, izinga lokushisa eliphakeme. Ngesisekelo sokuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa, ingadlala indima yokuhlobisa, engagqoki imishanguzo, yokuwasha, engafakwanga uthuli, i-anti-skid, ukusebenza okuhle kakhulu, umbala ofanayo kanye nokucwebezela.
Isikhathi Iposi: Jul-23-2021
Indawo Yezimboni yaseLi'an, Ukuvikelwa Kwezemvelo Umgwaqo Ophakathi, Idolobha laseShatian, iDongguan City